पानी परेपछि सलहको जोखिम कम हुने विज्ञको भनाई
भारत हुँदै केही दिनअघि नेपालको तराईका जिल्लामा देखापरेको सलह मङ्गलबार काठमाडाैँमा देखिएको छ । देशका अधिकंश स्थानमा देखिएको सलहको प्रभाव पानी परेपछि कम हुने जनाइएको छ ।
गत शनिबार रुपन्देही, सिन्धुली, चितवनलगायत जिल्लामा देखापरेको सलह वर्षा भएपछि म’र्ने गर्छ । वरिष्ठ कृषिविज्ञ डा. केदार बुढाथोकीका अनुसार सलहको सङ्ख्या लाखौँ वा करोडौँको परिमाणमा हुन्छ ।
“काठमाडौँमा देखा परेको सलहको झुण्ड ठूलो होइन” डा. बूढाथोकीले भने । नेपालमा मनसुन शुरु भइसकेकाले यसको प्रभाव कम हुने अनुमान गरिएको छ । पूर्वी दिशाबाट पश्चिमतिर बहेको हावासँगै सलह पनि पश्चिमतिर सर्ने अनुमान मौसम तथा जलवायु महाशाखाले गरेको छ ।